BUDDHIST TERMS' Dictionary: TRAINING - သိက္ခာ
TRAINING - သိက္ခာ
သိက္ခာ (Sikkhᾱ) - သိက္ခာ သုံး-ပါး၊ လေ့ကျင့်မှု သုံး-မျိုး။
(၁) သီလသိက္ခာ - သီလအကျင့်၊ သမ္မ၀ါစာ - မှန်သောစကားဆိုခြင်း၊ သမ္မာကမ္မန္တ - မှန်သောအလုပ်ပြုခြင်း၊ သမ္မာအာဇီဝ - မှန်ကန်စွာ အသက်မွေးခြင်းတည်းဟူသော သီလအကျင့်၊
(၂) သမာဓိသိက္ခာ - သမာဓိအကျင့်၊ သမ္မာဝါယာမ - မှန်သောအားထုတ်မှု၊ သမ္မာသတိ - မှန်သောအောက်မေ့မှု၊ သမ္မာသမာဓိ - မှန်သောတည်ကြည်မှုတည်းဟူသော သမာဓိအကျင့်၊
(၃) ပညာသိက္ခာ - ပညာအကျင့်၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိ - မှန်သောအမြင်အယူ၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပ - မှန်သောကြံစည်မှု တည်းဟူသော ပညာအကျင့်။
ဤသိက္ခာသုံးပါးကိုပင် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ဟု ခေါ်သည်။
(1) Training in Morality: this consists of Right Speech, Right Action and Right Livelihood.
(2) Training in Concentration: this consists of Right Effort, Right Mindfulness and Right Concentration.
(3) Training in Wisdom: this consists of Right Understanding and Right Thinking.